IBlack Shark 2 ifika eSpain, ngukumkani omtsha wokudlala umdlalo | Iindaba zeGajethi
Le yi-smartphone entsha ye-Black Shark 2 esele ithengisiwe kwiwebhusayithi eyaziwayo yeAliexpress. Alithandabuzeki elokuba abasebenzisi abaninzi bebelindele ukumiliselwa kwesi sixhobo kwilizwe lethu kwaye ngoku phantse phantse inyanga ukusukela oko yaziswa ngokusemthethweni e-China, sinokuqinisekisa ukuba isixhobo ngoku siyathengwa kwi-Intanethi. ngepakethe yesipho sabathengi bokuqala abangama-80.
Kungenzeka ukuba uninzi aluzazi izibonelelo zale fowuni yeselfowuni eyenziweyo ukuze idlale ngayo, kodwa ukuvula imilomo yethu siza kwabelana nawe ngomthamo wokuqala IBlack Shark 2 ekweyona modeli inamandla ye-12GB + 256GB. Esi sisiqalo nje, emva kokutsiba siza kukubonisa zonke iinkcukacha eziphambili zesi sixhobo sinamandla siyilwe senzelwe i midlalo.
1 Isipho sabathengi bokuqala abangama-80
2 Iinkcazo eziphambili zeBlack Shark 2
Isipho sabathengi bokuqala abangama-80
Kungenzeka ukuba ungafiki ngexesha kuba kubonakala ngathi esi yayisisiphelo esingalindelwanga, kodwa kwimeko apho unakho kwaye ufuna ukuba unokhetho lokuthenga imodeli emnyama ye-Shark 2 8GB + 128GB nge-AliExpress kwaye uthathe ipakethi equka i-GamePad kunye neefowuni ezisemthethweni zenkampani Ixabiso le-58,90 euro ngexabiso elifanayo. Ungafikelela kwi apha kwesi sipho sikhethekileyo kodwa kwiwebhusayithi yayo esemthethweni isixhobo esanda kukhutshwa siyafumaneka.
Kodwa siza kubekela bucala ukwaziswa ngokusesikweni kwabokuqala abanethamsanqa ukumisela ukuthengwa eSpain kwaye siza kubona ezinye zeenkcukacha ezibalaseleyo zalesi sixhobo ezifike kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwivenkile ekwi-intanethi. Ngaphandle kwamathandabuzo ngokubanakho kunye nezixhobo zayo zangaphakathi, sisixhobo esiza kuqwalaselwa ngabaninzi ngaphambi kokuthenga enye i-smartphone.
Iinkcazo eziphambili zeBlack Shark 2
Siza kuqala ngeprosesa yesi sizukulwana sesibini sesixhobo seBlack Shark, ekubonakala ukuba inyusa i-Qualcomm Snapdragom 855 ye-premium-tier 2.84 GHz kunye ne-Adreno 640 GPU. Ubungakanani obuphezulu be-12GB + 256GB ke ngekhe sibe neengxaki zalo naluphi na uhlobo ngezinto zekhompyutha.
Ifriji ibizwa ngokuba «Ukupholisa uLwelo 3.0»Ukupholisa okumangalisayo kufezekiswa kwisixhobo esenzelwe ukuchitha iiyure sidlala, ukongeza kwi-4000mAh (typ) / 3900mAh (min) ibhetri kunye ne-4.0 yayo ekhawulezileyo nge-USB C port yenza ukuba ibe sisixhobo esinamandla ngokwenene . Kwaye asinakulibala malunga Isikrini se-intshi engama-6,39 kunye nomboniso we-AMOLED 19.5: 9 isikrini esigcweleyo esinikezela nge-430nit kunye nesisombululo esona siphezulu se-1080 x 2340. Ngokwenene
UDavid li, I-VP yeBlack Shark, icacise izinto ezininzi kumsitho wokuphehlelelwa eMadrid namhlanje kodwa kugxilwe ngaphezulu kwako konke kubudlelwane kunye neAliexpress Ivenkile ye-Intanethi evula iprojekthi entsha phakathi kweenkampani zombini kunye nezinto ezininzi eziluncedo kubasebenzisi belizwe lethu:
Sinovuyo ngokufika kweBlack Shark eSpain, intengiso esiyithatha njengeyona nto iphambili kwinkampani, kwaye nangakumbi ukuze sikwazi ukwenza njalo ngenxa yeAliExpress, esidibana nayo kakhulu.
Kuyinyani ukuba ishishini lomdlalo wevidiyo lihlala lisesichengeni samaza kwaye ngoku ngezixhobo ezithile kulula kakhulu ukuchitha iiyure udlala naphina, kunye nale modeli intsha yeBlack Shark 2 inkampani iphucula inguqu yayo yokuqala kwaye yenza isixhobo ngokwenene Kwilaptop yokudlala imidlalo. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kuninzi lixabiso kwaye le modeli intsha i-Black Shark 2 sele ifumaneka ngeendlela ezimbini zokumisela njengoko sixoxe ngasentla. La ngamaxabiso eemodeli ngokuxhomekeke kubumbeko esilukhethayo:
I-Shark emnyama 2 ene-8G + 128G nge 549 euro
I-Shark emnyama 2 ene-12G + 256G nge 649 euro
Isixhobo esimangalisayo esele sikhona kwilizwe lethu kwaye ikakhulu senzelwe uninzi lwabasebenzisi be-gamer nge Ukupholisa ulwelo okuqinisekileyo kugcina ubushushu kumanqanaba amkelekileyo nasemva kweeyure zokudlala ngale nkqubo yenziwe nguXiaomi ngesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IBlack Shark 2 ifika eSpain, ngukumkani omtsha wokudlala
Ukuhlaziywa kweConga 3090 yokucoca